↑ Study Compares Older and Younger Pedestrian Walking Speeds။ TranSafety, Inc (1997-10-01)။ 2009-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Walking Age Does Not Explain Term vs. Preterm Differences in Bone Geometry" (July 2007). J Pediatr. 151 (1): 61–6, 66.e1–2. doi:10.1016/j.jpeds.2007.02.033. PMID 17586192.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လမ်းလျှောက်ခြင်း&oldid=626607" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။